SAGARWINE - We Can Build Together
We can build together!
Recent Questions Most Answered Answers Most Visited Most Voted No Answers Recent Posts
Download ရယူရန် – ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေ ( ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့အထိ ပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း ပြန်လည်ပုံနှိပ်သည်။ )
Download ရယူရန် – ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေ
( ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့အထိ ပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း ပြန်လည်ပုံနှိပ်သည်။ )
Asked: 10 Nov 2020 In: နိုင်ငံရေး
၂၀၂၀ ခုနှစ်၏ တည်ဆဲ နိုင်ငံရေးပါတီများ စာရင်း
စဉ် နိုင်ငံရေးပါတီအမည် ဥက္ကဋ္ဌ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး လိပ်စာ ၁ မြိုတိုင်းရင်းသားဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ(MRO NATIONAL DEVELOPMENT PARTY) ဦးစံသာအောင် ဦးကျော်မင်း (တွဲ/တွင်းမှူး-၁) အမှတ်(၂၀၂)စာတိုက်လမ်း၊ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၄၈၄၀၆၂၀၂၊၀၉-၂၆၃၄၇၈၀၀၅၊၀၄၃-၇၀၀၇၀ ၂ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ ဦးသန်းတင် ဦးသိန်းထွန်း အမှတ်(၂၄)၊အောင်ဇေယျာလမ်း၊ရွှေတောင်ကြား(၁)ရပ်ကွက်၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၅၄၁၉၆၁၊၀၁-၅၅၇၄၈၀၊၀၁-၅၅၄၂၁၉ ဖက်စ်-၀၁-၅၅၇၄၅၆၊၀၁-၃၈၆၉၃၆ ၃ လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ ဒေါ်အေးသီတာမြင့် ဦးဂျာပို အမှတ်(၄၉)၊ ပြည်တော်သာလမ်းနှင့် အေးချမ်းသာယာလမ်းသွယ် (၃)ကြား၊ နယ်မြေ (၇)၊ ရပ်ကွက် (၁)၊ လားရှိုးမြို့။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၉၂၁၉၆၇၂၊၀၉-၄၂၈၂၁၉၀၈၁၊၀၈၁-၂၃၁၀၆၊၀၉-၅၂၆၀၂၉၄ ၄ ကိုးကန့်ဒီမိုကရေစီနှင့်ညီညွတ်ရေးပါတီ ဦးထွန်းနိုင် ဦးအောင်ကျော်ဖြိုး(ခ) ဟော်ထိုက်ကျင်း (တွင်း/မှူး-၁) အမှတ်(ဌ/၁၉/၇၆၄)၊ဟူးမွန်လမ်း၊မန်ဆူရှမ်းကျောင်းနောက်၊နယ်မြေ(၁၉)၊ရပ်ကွက်(၁၂)၊လားရှိုးမြို့၊ရှမ်းပြည်နယ်။ ဖက်စ်၀၉-၅၂၆၂၁၉၅၊ ၀၈၁-၂၄၆၂၇ ဖုန်းနံပါတ်-၀၉၅၁၁၃၁၈၆၊၀၁-၅၅၉၅၃၉၊၀၈၁-၂၂၂၂၄၊၀၉-၆၇၀၀၉၇၁ ၅ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(PNO) ဦးစံလွင် ဦးခွန်သိန်းဖေ အမှတ်(၁၈)၊အနောက်မြို့ပတ်လမ်း၊စျေးပိုင်းရပ်၊တောင်ကြီးမြို့၊ရှမ်းပြည်နယ်။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၂၈၂၁၈၃၁၄၊၀၈၁-၂၁၂၄၆၉၁၊၀၉-၃၆၃၅၂၃၅၅၊၀၉-၂၅၀၃၄၃၁၄၅၊၀၉-၂၅၃၃၃၆၅၀၂ ၆ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ) ဦးသုဝေ ဒေါ်သန်းသန်းနု (တွင်း/မှူးချုပ်) တိုက်အမှတ်(၈)၊ပထမထပ်(ဝဲ)၊မနောဟရလမ်း၊မလွှကုန်း ဌေးကြွယ်(က)ရပ်ကွက်၊တာမွေမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ဖုန်းနံပါတ်၀၉-၈၀၂၀၂၅၄၊ ၀၁-၅၄၁၆၄၉၊၀၉-၅၀၈၄၉၆၃ ၇ ကယန်းအမျိုးသားပါတီ ခွန်းဘီထူး(ခ)လွီးစီငြိမ်း ခွန်းကလေးမင်း (တွင်း/မှူး-၁) အမှတ်(၁၄၆)၊စျေးလမ်း၊ညောင်ကုန်း(၃)ရပ်ကွက်၊ဖယ်ခုံမြို့၊ရှမ်းပြည်နယ်။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၈၁-၅၆၀၈၈၊၀၉-၇၉၂၅၃၀၅၈၇၊၀၉-၄၂၈၀၀၅၁၂၇၊၀၉-၄၂၈၀၀၅၁၂၇ ၈ ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားအင်အားစုပါတီ ဦးအေးကြိုင် ဒေါ်မသန်းစိန် တိုက်(၁၀)၊အခန်း(၁၀၄)၊ရွှေလင်ပန်းတန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၉၄၂၁၀၉၅၈၃၃၊၀၉-၄၂၁၀၄၂၄၅ ၉ ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ ဦးထွန်းအောင်မြင့် ဦးစောစေးဝါး တိုက်အမှတ်(၁၀)၊အခန်းအမှတ်(၂၀၁)၊ရွှေလင်ပန်းတန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ၊ရွှေနှင်းဆီလမ်း၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ဖုန်းနံပါတ်- ၀၁-၆၁၁၆၁၂၊ ၀၁-၆၁၁၂၃၈၊၀၉-၅၁၈၀၁၆၄၊ ၀၉-၂၅၀၀၅၀၈၀၆ ၁၀ တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ ဦးအိုက်မုန်း ဦးထွန်းကျော် အမှတ်(က/၁၁၀)ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊မင်္ဂလာရပ်၊နမ့်ဆန်မြို့၊ရှမ်းပြည်နယ်။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၂၀၀၃၅၄၁၊၀၉-၄၃၁၄၆၂၅၀၊၀၉-၆၇၁၂၀၅၁၊ ၀၉-၉၀၄၀၆၅၁ ၁၁ ဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ ဦးမျိုးညွန့် – အခန်းအမှတ်(၄၀၇)၊ ဆာကူရာဟိုတယ်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၅၁၅၁၀၀၇၀၊ ၀၉-၆၉၇၄၁၂၆၀၃ ၁၂ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်း ဦးစိုင်းဘိုးအောင် တောင်ကြီးဟိုပုန်းအထွက်လမ်း၊(၄)မိုင်၊တောင်ကြီးမြို့၊ရှမ်းပြည်နယ်။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၅၁၅၉၉၉၈၊ ၀၈၁-၂၀၂၀၆၄၊ ၀၉-၇၃၀၄၆၂၀၆ ၁၃ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ(ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)ပါတီ ဦးရဲထွန်း ဦးလေးစိုး တိုက်(အက်ဖ်)၊အခန်း(၃၀၁)၊ပုလဲကွန်ဒိုမီနီယံ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၅၅၆၅၅၄၊၀၉-၅၁၉၇၆၂၆ ၁၄ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဦးအေးလွင် ဦးဌေးငွေ (တွဲဖက်/ထွေမှူး) တိုက်(အက်ဖ်)၊အခန်း(၃၀၁)၊ပုလဲကွန်ဒိုမီနီယံ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၅၅၆၅၄၄၊၀၉-၅၁၈၇၉၉၁ ၁၅ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်များအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဦးသိမ်းကြည် ဦးကျော်သူအောင် အမှတ်(၁၀၁၀)(ခ)၊ပညာလမ်း၊(၄)ရပ်ကွက်၊တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၅၃၃၃၁၅၆၊၀၉-၄၉၁၅၅၉၈၃၊၀၉-၇၃၀၉၄၂၁၃၊ ၀၉-၄၂၁၇၂၂၃၅၁ ၁၆ ဝံသာနုဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဦးရဲမင်း ဦးကျော်ကျော် နန်းဦးလွင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၂၅၉၀၄၅၄၂၁၊၀၉-၇၉၉၉၉၆၄၄၁၊၀၉-၉၅၀၁၅၀၅၄၅ ၁၇ ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီ ဦးထွန်းအောင်ကျော် ဒေါ်ရီရီစံ အခန်း(၁၀၂)၊တိုက်(၇၉/၈၀)၊အောင်သုခလမ်း၊ဟံသာရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊(၅)ရပ်ကွက်၊ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၇၃၂၃၈၃၂၄၊၀၉-၈၆၁၄၃၇၂၊၀၁-၅၀၄၈၈၂၊၀၁-၅၀၅၃၀၇ ၁၈ မတူကွဲပြားခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ ဒေါ်စန္ဒာဦး ဒေါ်ဝင့်ဝါဌေး အခန်း(၂/၂/၂၃၂)၊မဟော်ဂနီလမ်း၊ထောက်ကြန့် တိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၂၂၅၃၆၆၄၁၊ ၀၉-၄၃၁၀၁၀၀၁၊ ၀၉-၇၈၀၁၅၆၂၇၃၊ ၀၉-၂၅၂၄၇၈၀၀၈ ၁၉ အင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ ဦးဝင်းမြင့် ဦးကင်းညို အမှတ်(၂)၊မင်္ဂလာရပ်၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ညောင်ရွှေမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၈၁-၂၀၉၅၉၉၊၀၉-၄၂၈၃၁၀၀၁၁(ဦးဝင်းမြင့်) ၂၀ Read more
၁ မြိုတိုင်းရင်းသားဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ(MRO NATIONAL DEVELOPMENT PARTY) ဦးစံသာအောင် ဦးကျော်မင်း
၂ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ ဦးသန်းတင် ဦးသိန်းထွန်း အမှတ်(၂၄)၊အောင်ဇေယျာလမ်း၊ရွှေတောင်ကြား(၁)ရပ်ကွက်၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၃ လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ ဒေါ်အေးသီတာမြင့် ဦးဂျာပို အမှတ်(၄၉)၊ ပြည်တော်သာလမ်းနှင့် အေးချမ်းသာယာလမ်းသွယ် (၃)ကြား၊ နယ်မြေ (၇)၊ ရပ်ကွက် (၁)၊ လားရှိုးမြို့။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၉၂၁၉၆၇၂၊၀၉-၄၂၈၂၁၉၀၈၁၊၀၈၁-၂၃၁၀၆၊၀၉-၅၂၆၀၂၉၄
၄ ကိုးကန့်ဒီမိုကရေစီနှင့်ညီညွတ်ရေးပါတီ ဦးထွန်းနိုင် ဦးအောင်ကျော်ဖြိုး(ခ)
ဟော်ထိုက်ကျင်း (တွင်း/မှူး-၁) အမှတ်(ဌ/၁၉/၇၆၄)၊ဟူးမွန်လမ်း၊မန်ဆူရှမ်းကျောင်းနောက်၊နယ်မြေ(၁၉)၊ရပ်ကွက်(၁၂)၊လားရှိုးမြို့၊ရှမ်းပြည်နယ်။ ဖက်စ်၀၉-၅၂၆၂၁၉၅၊ ၀၈၁-၂၄၆၂၇
၅ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(PNO) ဦးစံလွင် ဦးခွန်သိန်းဖေ အမှတ်(၁၈)၊အနောက်မြို့ပတ်လမ်း၊စျေးပိုင်းရပ်၊တောင်ကြီးမြို့၊ရှမ်းပြည်နယ်။
၆ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ) ဦးသုဝေ ဒေါ်သန်းသန်းနု
(တွင်း/မှူးချုပ်) တိုက်အမှတ်(၈)၊ပထမထပ်(ဝဲ)၊မနောဟရလမ်း၊မလွှကုန်း ဌေးကြွယ်(က)ရပ်ကွက်၊တာမွေမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၇ ကယန်းအမျိုးသားပါတီ ခွန်းဘီထူး(ခ)လွီးစီငြိမ်း ခွန်းကလေးမင်း
၈ ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားအင်အားစုပါတီ ဦးအေးကြိုင် ဒေါ်မသန်းစိန် တိုက်(၁၀)၊အခန်း(၁၀၄)၊ရွှေလင်ပန်းတန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၉ ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ ဦးထွန်းအောင်မြင့် ဦးစောစေးဝါး တိုက်အမှတ်(၁၀)၊အခန်းအမှတ်(၂၀၁)၊ရွှေလင်ပန်းတန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ၊ရွှေနှင်းဆီလမ်း၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ဖုန်းနံပါတ်- ၀၁-၆၁၁၆၁၂၊ ၀၁-၆၁၁၂၃၈၊၀၉-၅၁၈၀၁၆၄၊ ၀၉-၂၅၀၀၅၀၈၀၆
၁၀ တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ ဦးအိုက်မုန်း ဦးထွန်းကျော် အမှတ်(က/၁၁၀)ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊မင်္ဂလာရပ်၊နမ့်ဆန်မြို့၊ရှမ်းပြည်နယ်။
၁၁ ဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ ဦးမျိုးညွန့် – အခန်းအမှတ်(၄၀၇)၊ ဆာကူရာဟိုတယ်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၁၂ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်း ဦးစိုင်းဘိုးအောင် တောင်ကြီးဟိုပုန်းအထွက်လမ်း၊(၄)မိုင်၊တောင်ကြီးမြို့၊ရှမ်းပြည်နယ်။
ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၅၁၅၉၉၉၈၊ ၀၈၁-၂၀၂၀၆၄၊ ၀၉-၇၃၀၄၆၂၀၆
၁၃ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ(ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)ပါတီ ဦးရဲထွန်း ဦးလေးစိုး တိုက်(အက်ဖ်)၊အခန်း(၃၀၁)၊ပုလဲကွန်ဒိုမီနီယံ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၁၄ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဦးအေးလွင် ဦးဌေးငွေ
(တွဲဖက်/ထွေမှူး) တိုက်(အက်ဖ်)၊အခန်း(၃၀၁)၊ပုလဲကွန်ဒိုမီနီယံ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၁၅ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်များအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဦးသိမ်းကြည် ဦးကျော်သူအောင် အမှတ်(၁၀၁၀)(ခ)၊ပညာလမ်း၊(၄)ရပ်ကွက်၊တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၁၆ ဝံသာနုဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဦးရဲမင်း ဦးကျော်ကျော် နန်းဦးလွင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
၁၇ ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီ ဦးထွန်းအောင်ကျော် ဒေါ်ရီရီစံ အခန်း(၁၀၂)၊တိုက်(၇၉/၈၀)၊အောင်သုခလမ်း၊ဟံသာရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊(၅)ရပ်ကွက်၊ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၁၈ မတူကွဲပြားခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ ဒေါ်စန္ဒာဦး ဒေါ်ဝင့်ဝါဌေး အခန်း(၂/၂/၂၃၂)၊မဟော်ဂနီလမ်း၊ထောက်ကြန့် တိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၂၂၅၃၆၆၄၁၊ ၀၉-၄၃၁၀၁၀၀၁၊ ၀၉-၇၈၀၁၅၆၂၇၃၊ ၀၉-၂၅၂၄၇၈၀၀၈
၁၉ အင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ ဦးဝင်းမြင့် ဦးကင်းညို အမှတ်(၂)၊မင်္ဂလာရပ်၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ညောင်ရွှေမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်။
၂၀ ဖလုံ – စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဦးစောသိန်းအောင် ဦးစဘီကျင်ဦး ငုရွှေဝါလမ်းနှင့်အင်ကြင်း(၂)လမ်းထောင့်၊အမှတ်(၉) ရပ်ကွက်၊ဘားအံမြို့၊ကရင်ပြည်နယ်။
၂၁ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဦးလှသိန်း ဦးခင်မောင်ဇံ အမှတ်(၂၀၂/၂၀၆)၊(၄ လွှာ-ယာ)၊ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၂၂ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဦးသန်းဌေး ဦးသက်နိုင်ဝင်း အမှတ်(၅)၊ရာဇသင်္ဂဟလမ်းနှင့် “စီ”လမ်းထောင့်၊ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊နေပြည်တော်။
ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇-၄၁၉၂၄၄၊ ၀၉-၅၁၆၃၂၈၅၊ ၀၆၇-၄၁၉၂၅၇၊ ဖက်စ်-၀၆၇-၄၁၉၂၇၄
၂၃ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဦးဟီဝါး ဦးဆန်လှေးမန် အမှတ်(အ/၉၁)၊ လိုင်လင်းပီ၊ မတူပီမြို့နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်။
၂၄ ကမန်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ ဦးလှတိုး
၂၅ ခမီအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ ဦးစိန်လှကျော် ဦးလေသာကျော် အိမ်အမှတ်(၁၁၄)၊အကွက်(၁)၊ဆင်ကူးလမ်း ရပ်ကွက်၊စစ်တွေမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်။
၂၆ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ ဦးခင်မောင်ဆွေ ဒေါက်တာဝင်းနိုင် အမှတ်(၄၇)၊ပထမထပ်၊ အနောက်မြင်းပြိုင် ကွင်းလမ်း၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်းတိုင်းဒေသကြီး။
၂၇ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ ဦးဇော်မင်း ဦးအေးထွန်း တိုက်(၃၀)၊ အိမ်အမှတ်(၂၅)၊ ၅၄ လမ်း(အောက်)၊(၄)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉-၅၁၇၄၄၆၁၊၀၉-၇၃၁၂၇၉၁၄၊ ၀၉-၇၃၁၁၇၀၀၁
၂၈ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ် ဦးသိန်းညွန့် ဒေါ်ခိုင်စန္ဒာ
ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉-၄၀၇၇၉၇၉၈၈၊ ၀၉-၄၅၇၄၉၆၁၁၃
၂၉ ဗမာပြည်သူ့ပါတီ ဦးအောင်သန်းတင့် ဦးသက်ဦး တိုက်အမှတ်(၉)၊အခန်း(၀၀၅)၊ရွှေအင်ကြင်းလမ်း၊ရွှေလင်ပန်းတန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး။ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၉၂၂၉၂၇၁၊၀၁-၂၉၆၆၉၃
၃၀ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဉာဏ်ဝင်း
၃၁ မြန်မာ့လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဦးဇင်အောင် ဦးသိန်းထွန်း အမှတ်(၄၆၇)၊ ကောလိယ(၂၁)လမ်း၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၃၂ မြန်မာအမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ ဦးကောင်းမြင့်ထွဋ် ဦးတင်အောင် အမှတ်(၄၀၀)၊ (၄)လွှာ၊ ဇေယျာ(၁၀)လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၃၃ မြိုတိုင်းရင်းသားပါတီ ဦးအေးထွန်း ဦးမင်းအောင်
၃၄ တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ)အမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ ဦးစိုင်းဌေးအောင် ဦးစိုင်းကျော်ညွန့် အမှတ်(၉၀)၊ လမ်းသွယ် (၁၅)၊ ဇော်ဂျီလမ်းနှင့် ကုသိုလ်တော်လမ်းကြား၊ (၆၈) လမ်း၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
၃၅ အရှိုချင်းအမျိုးသားပါတီ ဦးဆလိုင်းဟန်ကြည် ဦးဆလိုင်းအောင်မင်းလှိုင် အမှတ်၅၃ (ဒီ)၊တောင်သူကုန်းလမ်း၊တောင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊အင်းစိန်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၃၆ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခွန်ထွန်းဦး စိုင်းလ (ခ) စိုင်းလိတ် အမှတ်(၁၅၇)၊ ကိုးမိုင်၊ ပြည်လမ်း၊ ရပ်ကွက်(၅)၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၃၇ ဓနုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီ ဦးခင်မောင်ချို ဦးကိုကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနရုံးအနီး၊ဗထူးလမ်း၊စျေးတန်းရပ်၊ရွာငံမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်။
၃၈ ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ပူကျင့်ရှင်းထန် ပူဂင့်ကမ်းလျန် အမှတ်(၂၀၃)၊အခန်း(၁၈)၊(၃)လွှာ၊ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၂၁၇၁၅၀၁၁၊ ၀၉-၅၁၉၉၉၅၃၊ ၀၁−၃၉၇၃၈၉
၃၉ ရှမ်းပြည်ကိုးကန့်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဦးအန်တိုနီစူ ဦးမြင့်ခိုင် ကြည်ရှန်လမ်း၊ရပ်ကွက်(၁)၊တုံချန်၊လောက်ကိုင်မြို့၊ရှမ်းပြည်နယ်။
၄၀ မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ ဦးကျော်စွာစိုး(ခ)
ဦးကျော်စွာအောင် ဒေါ်ခင်သန်းဦး အမှတ်(င/၁၀)၊ မြို့တော်(၂)လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ် (အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၄၁ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကွန်ဂရက်ပါတီ ဒေါက်တာလှမြင့် ဦးညီညီလတ်(တွင်း/မှူးချုပ်) အမှတ် (၃၆၅- D) ကျိုက္ကဆံလမ်း၊ တာမွေကြီး(ခ)ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၃၀၁၀၈၅၂၊ ၀၉-၂၅၀၀၈၅၀၁၆၊ ၀၉-၄၃၀၅၇၅၇၆၊ ၀၉-၅၁၉၂၇၆၁၊
၄၂ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးပါတီ ဦးကျော်မင်း(ခ)
(တွင်း/မှူး) အမှတ်(၂၄)၊ ပထမထပ်၊(၁၀၁)လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၄၃ အမျိုးသားတိုးတက်မြင့်မားရေးပါတီ ဦးဝင်းမြင့်အောင်(ခ)ဦးဝင်းခန့် ဒေါ်စန်းသူဇာ
(တွင်း/မှူး) အမှတ်(၆၄/၄)၊(၂၄) လမ်း၊နဝဒေးဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၄၄ ကချင်အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ ဒေါက်တာMကောန်လ ဦးဇယ်ဇောင်း အမှတ်(၆၉)၊ဒူကတောင်ရပ်ကွက်၊မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်။
၄၅ လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ(ဒူးလေးပါတီ) ဦးရွှေမင်း(ခ)
ဆီဖာလာလူး ဦးလေမေတား အမှတ်(၁၈/၁၃)၊ရမ်ပူရပ်ကွက်၊မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်။
၄၆ ထားဝယ်တိုင်းရင်းသားများပါတီ ဦးအေးမင်း ဒေါ်နွယ်နီသိန်း အမှတ်(၁၀၆၉)၊ ကရပ်ပြင်မြောက်ရပ်၊ ဆေးရုံလမ်း၊ ထားဝယ်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး။
၄၇ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပါတီ ဦးစောသန်းမြင့် ဦးကျော်ဇံသာ
၄၈ ပြည်ထောင်စုပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (ပ.အ.မ.ဖ)ပါတီ − − အမှတ်(မ/၁၉၅)၊ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ကံသာဓမ္မာရုံအရှေ့ဘက်၊မြို့မရပ်ကွက်၊တောင်ကြီးမြို့၊ရှမ်းပြည်နယ်။
၄၉ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ဦးသာထွန်းလှ ဦးခိုင်ပြည်စိုး အမှတ် (၃၇၉)၊ လမ်းမတော်တောင်ရပ်ကွက်၊ လမ်းမကြီး၊ စစ်တွေမြို့။
၅၀ ခူမီး(ခမီး)အမျိုးသားပါတီ − − အမှတ်(၆)၊ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ရိက္ခာရပ်ကွက်၊ပလက်ဝမြို့နယ်၊ချင်းပြည်နယ်။
ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉-၂၆၂၉၃၅၁၈၀(ဦးကျော်ထွန်း)၊ ၀၉-၇၃၁၆၂၈၁၇
၅၁ လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ ဦးအောင်မိုးဇော် ဦးသီဟထွဋ်ခင် (ခ) ဦးသီဟ (ထွေ/မှူး) အမှတ်(၁၂၄)၊ စတုတ္ထထပ်၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း(၅၇လမ်းထောင့်)၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၅၂ ကရင်အမျိုးသား ပါတီ မန်းသိန်းရွှေ မန်းကျော်ငြိမ်း အမှတ်(၇၁)၊တတိယထပ်(ညာ)၊ စက်တွင်းလမ်း၊ ဂဠုန်ရပ်ကွက်၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၅၃ မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူလယ်သမား အလုပ်သမား ပြည်သူ့ပါတီ ဦးအောင်မျိုးခိုင် ဒေါ်စန်းစန်းကျော့
(တွင်း/မှူး-၁) အမှတ်(၂)၊တကောင်းဘုရားလမ်း၊(၄) ရပ်ကွက်၊ပုသိမ်မြို့၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။
၅၄ မြိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီ ဦးမောင်စံအောင်
(ယာယီ ဥက္ကဋ္ဌ) ဦးမောင်ကိုဌေးဝင်း
(တွင်း/မှူး) အိမ်အမှတ် (၁၂၇၀)၊ ဗုဒ္ဓဂါယာလမ်း၊ မြို့သစ်ရပ်၊ မြောက်ဦးမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။
၅၅ ဓနုအမျိုးသားများအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဦးတင်မောင်ဦး ဦးနေမျိုး အိမ်အမှတ်(စျ-၃၄၈)၊သစ္စာလမ်း၊စျေးတန်း(တောင်ပိုင်း)ရပ်ကွက်၊ရွာငံမြို့၊ရှမ်းပြည်နယ်။
၅၆ ပြည်သူ့အကျိုးပြုကျောင်းသားများပါတီ ဦးမင်းမင်းထွန်း ဦးဌေးလွင် တိုက်(၉)၊အခန်း(၁၀၅)၊ရွှေလင်ပန်းအိမ်ရာ၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၅၇ လမ်းပြကြယ်ပါတီ ဦးဇော်ဝင်းတင့် ဦးညိုလင်းမောင်
၅၈ ရှမ်းနီ(တိုင်းလျန်)သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ [Shan-ni Solidarity Party(SSP)] ဦးအောင်ခင်း ဦးစောဝင်းထွန်း အမှတ်(၁/၈၉)၊ မြို့ပတ်လမ်း၊ အေးသာယာရပ်၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။
၅၉ လူ့ဘောင်သစ်ပါတီ ဦးဇေယျ ဦးအောင်ဇေယျ
(တွဲထွေ/မှူး) အမှတ်(၂၃၆/၂၃၈)၊ အခန်း(၈)၊ မဟာဘောဂလမ်းနှင့် ဗားဂရာလမ်းထောင့်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးး။
၆၀ ၈၈ မျိုးဆက်ဒီမိုကရေစီပါတီ ဒေါ်တင်တင်ချို ဦးတင်အေး အမှတ်(၁၃၃)၊ငန်းတေးလမ်းမကြီး၊မော်လမြိုင်မြို့၊မွန်ပြည်နယ်။
၆၁ လော်ဝေါ်အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဒေါက်တာလခမ်ဒေါင်ခမ် ဦးဒေးဝိ
၆၂ ခေတ်သစ်ပြည်ထောင်စုပါတီ ဦးအောင်သန်း ဒေါ်အေးအေးရွှင်
၆၃ အာခါအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ ဦးထွန်းအောင် ဦးအားလယ်
(တွင်း/မှူး) အမှတ်(၂၈၁)၊ အာခါစျေးလမ်း၊ဝိန်းကျောက်ရပ်၊တာချီလိတ်မြို့၊ရှမ်းပြည်နယ်။
၆၄ ဇိုတိုင်းရင်းသားဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဦးခမ်အင်ထန်း ဦးလက်ဆွမ်းခိုင်
(တွင်း/မှူး-၁) အမှတ်(၁၅၀) ၅ လွှာ A ၊စမ်းချောင်းလမ်း၊ရှင်စောပုရပ်ကွက်၊မြေနီကုန်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၆၅ အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ ဒေါက်တာနေဇင်လတ် ဦးအောင်ဖြိုးကျော် အမှတ်(၈၈၈)၊တတိယထပ်၊မေတ္တာလမ်း၊(၁၀)ရပ်ကွက်၊ တောင် ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၆၆ အမျိုးသမီးပါတီ (မွန်) မိသန်းရှင် မိသန်းသန်းဆွေ ၅/ခ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မြိုင်သာယာ၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
၆၇ လူထုပါတီ(The Party for People) ဦးမျိုးမင်းထွန်း (ခ)
ပါစီပြည်ဟိန်း ဦးအေးသိုက် အမှတ်(၄/၃၆၁)၊ကာယ(၁၂)လမ်း၊သင်္ဃန်းကျွန်းကြီး၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၆၈ ပြည်ထောင်စုလယ်သမားအလုပ်သမားအင်အားစုပါတီ ဦးမင်းသူ ဒေါ်မူမူချို
၆၉ ဒိုင်းနက်လူမျိုးများတိုးတက်ရေးပါတီ ဦးအောင်ကျော်ဇော ဦးထွန်းအေးမောင်
(တွင်း/မှူး) အမှတ်(၅၉၃)၊မင်းစောမွန်လမ်း၊အမှတ်(၄) သပြေကုန်းရပ်ကွက်၊ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်(ယာယီ)။
၇၀ မြန်မာပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(MPD) ဦးဌေးကျော် ဦးလှိုင်ဖြိုး(တွင်း/မှူး၊ အဖွဲ့ဝင်) အမှတ်(၃)၊ဦးဘသင်းလမ်း၊ ပဲခူးလမ်းရပ်ကွက်၊ထောက်ကြန့်မြို့၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။[PC-11021]
၇၁ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဦးကျော်မြင့် ဦးမျိုးကျော် အမှတ်(၅၀၉)၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်း၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ ကျောက်တော်မြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။
၇၂ ပြည်သူ့အလုပ်သမားပါတီ ဦးကျော်ဇင် ဦးရန်နောင်စိုးမြင့် အခန်းအမှတ်(၁၀၂)၊တိုက်အမှတ် B-2၊ဗိုလ်မင်းရောင်အိမ်ရာ၊ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်း၊(၄၂)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉-၃၃၃၆၆၆၈၃၊ ၀၉-၉၆၅၀၈၆၁၂၃
၇၃ ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဦးဖိုးရယ် ဦးသဲရယ်
(တွင်း/မှူး) အမှတ်(၄၇)၊ဟော်ကြီးလမ်း၊ မင်္ဂလာရပ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ကယားပြည်နယ်။
၇၄ ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ မန်းအောင်ပြည်စိုး စောချစ်သန်း အမှတ် (၇) ရပ်ကွက်၊ ဦးအောင်မြတ်လမ်း၊ ဘားအံမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။
၇၅ အမျိုးသားညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (အန်၊ယူ၊ဒီ) ဦးစိန်ဝင်း ဒေါက်တာအောင်ဌေး
(တွင်း/မှူး) အမှတ်(၆၇၉)၊ သရဖီလမ်း၊ သပြေကုန်း၊ ကျောက်မျက်ပြတိုက်အနီး၊ ဇဗ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။
ဖုန်းနံပါတ် – ၀၉-၄၂၈၃၁၈၃၆၆
၇၆ ပြည်သူ့ပါတီ (People’s Party) ဦးကိုကိုကြီး ဦးရဲနိုင်အောင် အမှတ် (၉၀၆)၊ (၉) လွှာ၊ ယုဇနတာဝါ၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ဖုန်းနံပါတ် – ၀၉-၄၄၈၀၂၄၀၈၈၊ ၀၉-၅၁၆၆၆၃၇
၇၇ ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ[Arakan Front Party(AFP)] ဦးခင်နု ဒေါက်တာ
သိန်းထွန်းလှ အမှတ် (၇၇)၊ ပန်းခြံလမ်း၊ ရူပတောင်ရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။
ဖုန်းနံပါတ် – ၀၉-၄၂၁၇၂၄၃၈၀
၇၈ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ [UNION BETTERMENT PARTY (UBP)] သူရဦးရွှေမန်း ဦးစံရွှေအောင် အိမ်အမှတ်(A-3)၊ ရာဇသင်္ဂဟလမ်း၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ ဥတ္တရခရိုင်၊ နေပြည်တော်
၇၉ အခြေခံလူတန်းစားဘဝမြင့်မားရေးပါတီ [The Yeomanry Development Party(YDP)] ဒေါ်အေးအေးသင်း ဦးကျော်မြင့်
အမှတ်(၂၆၁၆/က)၊ လှော်ကားလမ်း၊ (၇၁)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဖုန်းနံပါတ် – ၀၉-၇၉၁၆၆၂၆၃၅၊ ၀၉-၅၀၉၅၄၈၀
၈၀ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(DNP) – – ဇေယျဌာနီလမ်းနှင့် ပန်းခင်းလမ်းထောင့်ရှိ စက်ြာဒီပါခြံ (ဘဲကုန်းမီးပွိုင့်အနီး)၊ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်
ဖုန်းနံပါတ် – ၀၉-၇၉၂၀၃၆၆၇၆၊ ၀၉-၂၀၃၂၈၅၃
၈၁ ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီ[Kachin State People`s Party(KSPP)] – – အမှတ် MGR(၁၆)၊ မလိဂင်ရာနယ်မြေ၊ မန်ခိန်-ရွှေစက်လမ်း၊ စီတာပူရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ်
ဖုန်းနံပါတ် – ၀၉-၂၄၀၁၁၅၀
၈၂ ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ(Chin National League For Democracy Party) ဦးငိုင်ဆာခ့် ဆလိုင်းကျဲအိုဘိခ်ထောင် တိုက်အမှတ် (B-၁၂)၊ အခန်း(၃၀၁)၊ ရွှေကမ္ဘာအိမ်ရာ၊ မင်းဓမ္မလမ်း၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၈၃ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ (Mon Unity Party) နိုင်တင်အောင် ဒေါက်တာမင်းနွယ်စိုး အမှတ်(၃၂၄)၊ (၂၂)လမ်း၊ မြိုင်သာယာ ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
၈၄ ချင်းတိုင်းရင်းသားများပါတီ [Chin National Party (CNP)] − − ကျောက်အိုးတောင်ကျေးရွာ၊ ကျောက်အိုးတောင်အုပ်စု၊ အောင်လံ မြို့နယ်၊ သရက်ခရိုင်၊ မကွေး တိုင်းဒေသကြီး
၈၅ ဒီမိုကရေစီပါတီသစ်(ကချင်) [New Democracy Party (Kachin)] [N.D.P (Kachin)] – – ချမ်းမောအိမ်ရာ (၁၇)၊ အမှတ်(၃) ရပ်ကွက်၊ ပန်ဝါမြို့၊ ချီဖွေမြို့နယ်၊ မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ ကချင်ပြည်နယ်
ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉-၄၅၉၄၄၉၇၈၉၊ ၀၉-၄၅၉၄၆၅၄၅၃
၈၆ နာဂအမျိုးသားပါတီ [Naga National Party (NNP)] – – ဇီးဖြူကုန်းရပ်ကွက်၊ ခန္တီးမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၈၇ ပြည်သူ့အင်အားပါတီ ဦးဌေးအောင် ဦးအေးဝင်း အမှတ်(၅၆၁)၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း၊ အမှတ် (၇)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉-၄၀၆၀၅၅၇၆၇၊ ၀၉-၄၄၃၄၃၃၄၄၇
၈၈ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ (People’s Pioneer Party) ဒေါက်တာ သက်သက်ခိုင် ဦးစောဟန်အေး အမှတ် ၆၃၊ လသာအောက်လမ်း၊ ၃ ရပ်ကွက်၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၈၉ ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီ(United Nationalities Democracy Party) ဦးဒေးဗစ်လှမြင့် နော်အုန်းလှ အမှတ်(၈)၊ ပထမထပ်၊ မနောဟရလမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉-၇၇၈၂၆၁၆၅၈၊ ၀၉-၇၇၃၃၇၇၉၈၂၊ ၀၉-၂၅၃၁၀၄၀၇၁
၉၀ အင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (Inn National League Party) ဦးအောင်ကြည်ဝင်း ဦးတိုးရ(ခ)ဦးထွန်းလှ (တွင်း/မှူး) ရုံးကြီးလမ်း၊ တိတ်နန်းတံတားအနီး၊ ကံသာရပ်၊ ညောင်ရွှေမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)
၉၁ ကချင်အမျိုးသားပါတီ (Kachin National Party) ဦးဘရန်ဒီး ဦးရောဘတ် အိမ်အမှတ်(၁၈၈)၊ နယ်မြေ(၇)၊ အေးချမ်းသာယာလမ်းသွယ်(၂)၊ ရပ်ကွက်(၁)၊ လားရှိုးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)
၉၂ မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားလယ်သမားမဟာမိတ်ပါတီ [Alliance of Myanmar’s Worker and Farmer Party (A.M.W.F.P)] ဦးတင်အေး ဦးတင်စိုး အမှတ်(၂၆၂၆)၊ အင်းဝင် (၄)လမ်း၊ နန်းတော်ရာရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။
၉၃ ‘ဝ’အမျိုးသားပါတီ (WA NATIONAL PARTY) ဦးဆိုင်ပေါင်းနပ် ဦးဆမ်းဆောင်ကား အမှတ်(၃၉)၊ ပန်လုံလမ်း၊ ပန်လုံလမ်း ရပ်ကွက်၊ ဟိုပန်မြို့၊ ‘ဝ’ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း
ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉-၅၂၆၁၄၀၁၊ ၀၉-၄၀၃၇၄၂၅၄၀
Data source: ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (website)
Asked: 19 Oct 2020 In: စီးပွားရေး
Asked: 19 Oct 2020 In: Digital Marketing
What’s been your biggest challenge marketing your business?
Asked: 07 Oct 2020 In: Information Technology
Since the new ‌iPad‌ Air, eighth-generation ‌iPad‌, and Apple Watch Series6have already been announced, the October event is expected to be Apple’s iPhone-centric event with Apple introducing the new iPhone 12 lineup. Link => Apple Events -Apple
Since the new ‌iPad‌ Air, eighth-generation ‌iPad‌, and Apple Watch Series6have already been announced, the October event is expected to be Apple’s iPhone-centric event with Apple introducing the new iPhone 12 lineup.
Link => Apple Events -Apple
Asked: 22 Sep 2020 In: Information Technology